အသကျ(၂၇) ကနေ (၃၅)နှဈ ကွားမှာပဲ တှကွေုံ့ရမယျ့ အခဈြစဈ အခဈြမှနျ - ONE DAILY MEDIA
ကြှနျုပျတို့အမြားစုရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးမြားမှာ ကြောငျးသားဘဝ တဈဖတျသတျခိုးကွိုကျခဲ့ရသူ
မြား ၊ လူငယျသဘာဝ dating မြား ၊ ကာလရှညျလကျတှဲပွီးမှ အဆုံးသတျလိုကျရသော နှလုံးသားရေးမြား ၊ ဒီတဈခါ နောကျဆုံးလူ အခဈြစဈ၊အခဈြမှနျပဲ လို့ ယုံမှတျပွီးကာမှ လှဲခြျောရပွနျခွငျးမြား စသဖွငျ့ အမြိုးစုံကွုံတှနေ့ရေလကျြ ရှိကွပါတယျ။
ကံကောငျးသညျကတော့ အခဈြရေးမှာ ဘဝလကျတှဲဖျောအစဈအမှနျနဲ့ တှဆေုံ့ရမညျ့ အသကျအပိုငျးအခွားကို သင်ျခြာပညာရှငျမြားက တှကျခကျြနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ ဒီတဈခါ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့သားမြား တငျဆကျပေးခငျြတာကတော့ right person နှငျ့ လှဲခြျောနလေို့ စိတျညဈနကွေမယျ့ စာဖတျပရိတျသတျမြားအတှကျ ခှနျအားဖွဈစမေယျ့ အခကျြအလကျမြားကို စုစညျးတငျပွပေးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၁) အခဈြစဈနဲ့ တှကွေုံ့ရမညျ့အခြိနျကို သင်ျခြာနညျးဖွငျ့ထုတျဖျောခွငျး
သင်ျခြာပညာရှငျ Dr. Hannah Fry က အခဈြစဈ၊ အခဈြမှနျကို တှရှေိ့ရမယျ့ အသကျအရှယျကိုထုတှကျခကျြနိုငျမယျ့ စာတမျးပွုစုမှုတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။သူမရဲ့ သုတသေနပွုစုမူထဲတှငျတော့ သင်ျခြာအခွခေံသဘောတရားမြား ၊ ပုစ်ဆာဖွရှေငျးနညျးမြား ၊ စာရငျးဇယားမြားစှာ တို့ပါဝငျပွီး “optimal stopping theory” လို့အမညျပေးထားပါတယျ။
အတိုခြုပျဆိုရငျ သူမရဲ့သီအိုရီတှငျ ကြှနျုပျတို့ဟာ ဘဝတလြှောကျ လူအမြားအပွားကို ရှေးခယျြခြိနျးတှနေို့ငျပွီး ထိုသူမြားအား လလေ့ာရငျးမှ မညျသညျ့အခြိနျတှငျ အကောငျးဆုံးလကျတှဲဖျောတဈယောကျကို အဆုံးသတျရှေးခယျြကိုရမညျကို သိနိုငျကွောငျးပါဝငျပါတယျ။
(၂) အသကျ(၂၇)နှဈနောကျပိုငျးမှာ တှရှေိ့ရမယျ့ ဘဝလကျတှဲဖျော
သင်ျခြာနညျးအရ သငျ့ဘဝရဲ့ပထမ အရှယျမှာ အခဈြစဈနဲ့ တှရှေျိ့နိုငျမှုနှုနျးမှာ ‌နညျးပါးလှနျးလှပါတယျ။ ဥပမာ သငျဟာ အသကျ(၄၀)မတိုငျမှီလကျထပျလိုပွီး အသကျ(၁၅)နှဈမှ စတငျကာ ရညျစားမြားထားခဲ့မညျဆိုပါက (၁၅-၂၇)နှဈအတှငျးတှရှေိ့ခဲ့သူမြားနဲ့ ပြျောရှငျစရာအဆုံးသတျ ဖွဈလာနိုငျမညျမဟုတျပါ။
အသကျ(၂၇) နှဈ နောကျပိုငျးမှာတော့ သငျဟာ ဘဝလကျတှဲဖျောတဈယောကျကို ရှေးခယျြရမှာဖွဈပွီး ဆုံဖူးသမြှထဲ မညျသူကအကောငျးဆုံးဖွဈမညျကိုလညျး နှိုငျးယှဉျ ဆုံးဖွတျနိုငျမညျ ဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၂၇)နှဈမတိုငျမှီအထိ သငျကွုံတှခေဲ့ရသညျ့ Relationships မြားဟာ လကျတှဲဖျော ရှေးခယျြခွငျးရဲ့ အစိတျအပိုငျးမြှသာ ဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ကွောငျ့ပငျ သငျ့အပျေါ မညျသူက အကောငျးဆုံး ဖွဈစမေယျဆိုတာကို သငျခနျးစာမြားရပွီး ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျစှမျးမြားလညျး တိုးတကျလာမှာပါ။အသကျ ၂၀ ကြျောလှနျလာပွီး နောကျပိုငျး အသကျ ၃၀ နားနီးလာခြိနျမှာတော့ သငျဟာရငျ့ကကျြလာခွငျးနှငျ့အတူ အတှအေ့ကွုံလဲ အတျောအတနျရှိနပွေီဖွဈလို့ သငျ့ရဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျောတဈယောကျဖွဈလာရနျ လိုအပျခကျြမြားကို လကျတှကေ့ကြ စဉျးစားတတျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
(၄) မသိစိတျကနပေငျ ခံစားမိနခွေငျး
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ သငျဟာ အသကျ (၂၀) နှောငျးပိုငျးမြားမှာတော့ သင်ျခြာနညျးအရ တှကျခကျြမှုမြား မပါဝငျလြှငျတောငျမှ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြမှု အတှကျ လိုအပျခကျြမြား ၊ ဦးစားပေးစဥျးစားရမညျ့ အရာမြား ၊ လုပျသငျ့လုပျထိုကျသညျမြားကို အသကျအရှယျနှငျ့အတှအေ့ကွုံအရ မသိစိတျကနေ ခနျ့မှနျး ဆုံးဖွတျနိုငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
Dr.Fryer ရဲ့ သီအိုရီကတော့ သင်ျခြာကိနျးဂဏနျးမြားကို လူတို့၏ အကငျြ့စရိုကျ အမူအရာမြားနှငျ့ ပေါငျးစပျကာ တှကျခကျြထားခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိနျးဂဏနျးမြားဟာ မလိမျညာနိုငျသျောလညျး တဈဖကျမှာတော့ နှလုံးသားကို မလှနျဆနျနိုငျပွနျပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့ အသကျ(၂၇)နှဈ မတိုငျသေးခငျ သငျ့ဘဝတဈလြှောကျလုံး ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သငျ့တျောသူတဈဦး ကွုံတှလေ့ာရလြှငျတောငျ သီအိုရီအပျေါ အစှနျးရောကျယုံကွညျပွီး အခဈြစဈမဟုတျဘူးလို့ တပျအပျ မပွောနိုငျပွနျတာ‌ကွောငျ့ နှလုံးသားရဲ့ဆန်ဒနောကျကို လိုကျနိုငျပါတယျ။
ဒါဆို သငျတို့ရော အခဈြစဈကို တှကွေုံ့ရပွီးပွီလား ? ဘယျအရှယျမှာ တှကွေုံ့ခဲ့ရတာပါလဲ ? အတှအေ့ကွုံမြားကိုဝမြှေ ရေးသားပေးခဲ့နိုငျပါတယျ
အသက်(၂၇) ကနေ (၃၅)နှစ် ကြားမှာပဲ တွေ့ကြုံရမယ့် အချစ်စစ် အချစ်မှန်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းများမှာ ကျောင်းသားဘဝ တစ်ဖတ်သတ်ခိုးကြိုက်ခဲ့ရသူ
များ ၊ လူငယ်သဘာဝ dating များ ၊ ကာလရှည်လက်တွဲပြီးမှ အဆုံးသတ်လိုက်ရသော နှလုံးသားရေးများ ၊ ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးလူ အချစ်စစ်၊အချစ်မှန်ပဲ လို့ ယုံမှတ်ပြီးကာမှ လွဲချော်ရပြန်ခြင်းများ စသဖြင့် အမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရလျက် ရှိကြပါတယ်။
ကံကောင်းသည်ကတော့ အချစ်ရေးမှာ ဘဝလက်တွဲဖော်အစစ်အမှန်နဲ့ တွေ့ဆုံရမည့် အသက်အပိုင်းအခြားကို သင်္ချာပညာရှင်များက တွက်ချက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားများ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ right person နှင့် လွဲချော်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြမယ့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အချက်အလက်များကို စုစည်းတင်ပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ကြုံရမည့်အချိန်ကို သင်္ချာနည်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ခြင်း
သင်္ချာပညာရှင် Dr. Hannah Fry က အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်ကို တွေ့ရှိရမယ့် အသက်အရွယ်ကိုထုတွက်ချက်နိုင်မယ့် စာတမ်းပြုစုမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ သုတေသနပြုစုမူထဲတွင်တော့ သင်္ချာအခြေခံသဘောတရားများ ၊ ပုစ္ဆာဖြေရှင်းနည်းများ ၊ စာရင်းဇယားများစွာ တို့ပါဝင်ပြီး “optimal stopping theory” လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။
အတိုချုပ်ဆိုရင် သူမရဲ့သီအိုရီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘဝတလျှောက် လူအများအပြားကို ရွေးချယ်ချိန်းတွေ့နိုင်ပြီး ထိုသူများအား လေ့လာရင်းမှ မည်သည့်အချိန်တွင် အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကို အဆုံးသတ်ရွေးချယ်ကိုရမည်ကို သိနိုင်ကြောင်းပါဝင်ပါတယ်။
(၂) အသက်(၂၇)နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ တွေ့ရှိရမယ့် ဘဝလက်တွဲဖော်
သင်္ချာနည်းအရ သင့်ဘဝရဲ့ပထမ အရွယ်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရှ်ိနိုင်မှုနှုန်းမှာ ‌နည်းပါးလွန်းလှပါတယ်။ ဥပမာ သင်ဟာ အသက်(၄၀)မတိုင်မှီလက်ထပ်လိုပြီး အသက်(၁၅)နှစ်မှ စတင်ကာ ရည်စားများထားခဲ့မည်ဆိုပါက (၁၅-၂၇)နှစ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သူများနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအဆုံးသတ် ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အသက်(၂၇) နှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သင်ဟာ ဘဝလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆုံဖူးသမျှထဲ မည်သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုလည်း နှိုင်းယှဉ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၂၇)နှစ်မတိုင်မှီအထိ သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် Relationships များဟာ လက်တွဲဖော် ရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြောင့်ပင် သင့်အပေါ် မည်သူက အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကို သင်ခန်းစာများရပြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းများလည်း တိုးတက်လာမှာပါ။အသက် ၂၀ ကျော်လွန်လာပြီး နောက်ပိုင်း အသက် ၃၀ နားနီးလာချိန်မှာတော့ သင်ဟာရင့်ကျက်လာခြင်းနှင့်အတူ အတွေ့အကြုံလဲ အတော်အတန်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ သင့်ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် လိုအပ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားတတ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မသိစိတ်ကနေပင် ခံစားမိနေခြင်း
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်ဟာ အသက် (၂၀) နှောင်းပိုင်းများမှာတော့ သင်္ချာနည်းအရ တွက်ချက်မှုများ မပါဝင်လျှင်တောင်မှ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု အတွက် လိုအပ်ချက်များ ၊ ဦးစားပေးစဉ်းစားရမည့် အရာများ ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို အသက်အရွယ်နှင့်အတွေ့အကြုံအရ မသိစိတ်ကနေ ခန့်မှန်း ဆုံးဖြတ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dr.Fryer ရဲ့ သီအိုရီကတော့ သင်္ချာကိန်းဂဏန်းများကို လူတို့၏ အကျင့်စရိုက် အမူအရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ တွက်ချက်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းများဟာ မလိမ်ညာနိုင်သော်လည်း တစ်ဖက်မှာတော့ နှလုံးသားကို မလွန်ဆန်နိုင်ပြန်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အသက်(၂၇)နှစ် မတိုင်သေးခင် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သင့်တော်သူတစ်ဦး ကြုံတွေ့လာရလျှင်တောင် သီအိုရီအပေါ် အစွန်းရောက်ယုံကြည်ပြီး အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးလို့ တပ်အပ် မပြောနိုင်ပြန်တာ‌ကြောင့် နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒနောက်ကို လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို သင်တို့ရော အချစ်စစ်ကို တွေ့ကြုံရပြီးပြီလား ? ဘယ်အရွယ်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါလဲ ? အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှ ရေးသားပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်